Who were Bengali, so called Rohingya?: ဒေါက်တာ ကိုကိုကြီး ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ..?
တစ်ချိန်က ဘင်္ဂလီကျူးကျော်သူများကို တားဆီးဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့က တင်ထားတဲ့ ဒေါက်တာကိုကိုကြီးအကြောင်း ပို့စ်လေးက စာတွေပါ..... မသိသေးသူတွေ ဖတ်ဖို့ပါ.......
ပထမဦးဆုံး ပြောချင်တာက မလေးရှားနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူထားပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံသား အဖြစ်ကလည်း မစွန့်လွှတ်သေးတဲ့ မန္တလေးသား ဒေါက်တာ ကိုကိုကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကုလားနာမည်ဟာ Abdul Rahman Zafrudin လို့လဲ ခေါ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာကိုကိုကြီးဟာ ယခုလက်ရှိ မလေးရှားနိုင်ငံမှ မလေးရှားရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့မှာလည်း President ရာထူးကို ရယူထားသူပါ။
သူဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ရိုဟင်ဂျာတွေကို မလေးရှားကို တိတ်တဆိတ် ခိုးသွင်းပြီး ရာဘာခြံ၊ ဆီအုံးခြံများမှာ ထားရှိကာ လိုအပ်လျင် အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်များမှာ အသုံးပြုရန် စေခိုင်းလေ့ ရှိသူပါ။ ထိုသို့ခိုးသွင်းရန် စားရိတ်အား အလှူငွေကောက်ခံခြင်းဖြင့် ရယူသကဲ့သို့၊ ရိုဟင်ဂျာများထံမှလည်း လူကုန်ကူးက တောင်းယူကာ နှစ်သီးစားသူပါ။ ဇွန်လက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ရခိုင်တွေ ပြဿနာဖြစ်တော့ မလေးက မြန်မာနိုင်ငံသား အများစု အသတ်ခံရတာဟာလည်း သူ့လက်ချက် မကင်းပါဘူး။ သူဟာ Klinik Ng dan Lee, Wangsa Maju branch မှာ ဆေးခန်းထိုင်ပြီး သူ့ထံ ဆေးလာကုသူများထံမှ လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို မလိမ့်တပါတ် တောင်းယူထားလေ့ ရှိသူပါ။ ဒါကြောင့် ဇွန်လ ရိုဟင်ဂျာ ရခိုင် အရေးအခင်းနောက်ပိုင်း မလေးမှာ အသတ်ခံရတဲ့ မြန်မာအများစုကို သတ်မယ့်သူတွေဟာ လိပ်စာတွေသိနေခြင်း၊ ဖုန်းကြိုဆက်နိုင်ပြီး လူရှိတဲ့ နေရာကို လိုက်လာပြီး သတ်ဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းပါ။
မလေးရှားမှာနေထိုင်သူတိုင်း ဆလာရန်းဆိုတဲ့ မလေးရှားလူဆိုးဂိုဏ်းကို သိကြပါတယ်။ ဒေါက်တာ ကိုကိုကြီးဟာ ဆလာရန်းဂိုဏ်းနဲ့ တော်တော်လေး ရင်းရင်းနှီးနှီးပါတ်သက်နေပါတယ်။ ဆလာရန်းဂိုဏ်းမှာ လူလိုလျင်လည်း ရာဘောခြံ၊ ဆီအုံးခြံများတွင် ဖွက်ထားသည့် တရားမ၀င် ရိုဟင်ဂျာတွေကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုစေပြီး ဆလာရန်းဂိုဏ်းအတွင်းမှာ သူ့ရဲ့ သြဇာအာဏာကို တည်ဆောက်ယူလေ့ရှိပါတယ်။ ဒေါက်တာကိုကိုကြီးဟာ သောကြာနေ့ တိုင်း မြန်မာသံရုံးအနီးရှိ Ampang က ဗလီမှာ တက်လေ့ရှိပြီး သူဗလီသွားလျင် နောက်လိုက်နောက်ပါ ကိုယ်ရံတော်များနှင်သာ သွားလာလေ့ရှိပါတယ်။ ဒေါက်တာကိုကိုကြီး၏ နောက်လိုက်နောက်ပါ လူဆိုး လူမိုက်များဟာ သောကြာနေ့ ဗလီဝတ်ပြုပီးချိန်များတွင်း Rohingya စာတမ်းနီပါသည့် တီရှပ်များ လဲလှယ်ဝတ်ဆင်ပြီး သံရုံမှ ပြန်လာသည့် မြန်မာများအား ရိုက်နှက်ခြင်းများ ပြုလုပ်လေ့ရှိသူပါ။
ဒေါက်တာကိုကိုကြီးဟာ မလေးရှား ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ပြီး မလေးလူမျိုးများနဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့မှ ရိုဟင်ဂျာများအတွက် အလှူငွေများ ကောက်ခံပြီး ရွှေလီမှတစ်ဆင့် ပြည်တွင်းကိုပို့ပေးပါတယ်။ မလေးရှား၊ စင်္ကာပူမှာ ရှိတဲ့ ဇေယျာဆိုင်တွေဟာလည်း ဒေါက်တာကိုကိုကြီး ပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပြီး တရားမ၀င် ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများအပြင်၊ ငွေကြေးများစွာရရှိမည့် မူးယစ်ဆေးဝါး မှောင်ခိုသွင်းခြင်းများလည်း လုပ်ပါတယ်။ မနှစ်က မလေးရှားရှိ ဒေါက်တာကိုကိုကြီး ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဆိုင်တစ်ခုမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးအပြင်၊ သေနတ်၊ ဓါး အစရှိတဲ့ လက်နက်တွေ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒေါက်တာကိုကိုကြီး ဒီလိုမကောင်းမှုတွေ လုပ်နေသော်ငြား ဥပဒေအထက်မှာ ရှိနေခြင်းဟာ သူ၏သားမက်နှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒေါက်တာကိုကိုကြီး၏ သားမက်ဟာ မလေးရှားရှိ D9 ထောက်လှမ်းရေးကို တော်တော်လေး ပိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မလေးရှားရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းများမှာ ရိုဟင်ဂျာနှင့် အစ္စလာမ် ဘာသာတူများအား အလှူငွေများ ရရှိစေခြင်း၊ မလေးနိုင်ငံသားဖြစ်စေခြင်း အစရှိတာတွေကို များစွာလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား ၁၀၀၀ ကျော်အား လန်ကာဝီတွင် ယာယီစခန်းဖွင့်ပေးထားပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းဘက်သို့ ပြန်လည် စေလွှတ်နေပါတယ်။ ယာယီ ဒုက္ခသည်စခန်းရှိ မွတ်စလင် Refugee များတွေအတွက် ထောက်ပံ့ကြေးများအားလည်း အပြည့်အ၀ ပေးခြင်းမရှိပဲ ကြားမှဖြတ်တောက် ယူထားခြင်းများ ပြုလေ့ရှိသူပါ။ ဘာသာတူခြင်းအပေါ်တွင်လည်း မလှိမ့်တပါတ်နှင့် အနိုင်အထက်ပြုသူပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ မဖြစ်၊ ဖြစ်စေရန် သူဟာ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြံရွယ် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် လလယ်ပိုင်းတွင် RSO အဖွဲ့မှ နေရူးအစ္စလာမ်နှင့် အင်ဒိုနီးရှား မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ၉ လပိုင်း ကျောက်ဖြူတွင် ဆူပူမှုဖြစ်စေရန် စနစ်တကျ အကွက်ချ ကြံစည်ခဲ့ ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာရှိသော သူ့၏ ညီ မောင်မောင် (ရွှေကရ၀ိတ်) အပါအ၀င်၊ စွမ်းအား အီလက် ထရောနစ် ပိုင်ရှင် အောင်ဇော်ဝင်း၊ မြစ်မခ မီဒီယာမှ သတင်းထောက် မင်းမင်းလတ်နှင့် ပုဂ္ဂလိက စာသင်ကျောင်းပိုင်ရှင် ဇော်မင်းထွန်းတို့နဲ့ သူဟာ တကြိတ်တည်း တဥာဏ်တည်း လုပ်ဆောင်နေခြင်းပါ။ ရံဖန်ရံခါမှာ ရဲရင့်သစ္စာဆိုသူထံ ရိုဟင်ဂျာ လော်ဘီလုပ်ပေးရန်လည်း အကူအညီတောင်းခံ ရင်း ငွေပို့ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ထိုသူများ၏ အကူအညီဖြင့် မွတ်စလင် လူထုအား ပစ်မှတ်ထားသော M-Media အား ဖေ့ဘွတ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး သတင်းမှားများနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မုန်းတီးတဲ့စာများကို အဓိက ဦးစားပေး ဖြန့်ချီစေခြင်းပါ။ ၄၈ လမ်း ဗလီ မီးလောင်သည့်နေ့တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ဆလာရန်းမှာ သူ့လူများအား မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ထွက်ရိုက်စေရန် စေခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာကိုကိုကြီးဟာ ဇွန်လအရေးအခင်း ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ သိက္ခာကျစေရန် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများထံ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံသတင်းများ ပေးပို့စေခဲ့သူဖြစ်သလို၊ အွန်လိုင်းပေါ်မှ မျိုးချစ် မြန်မာလူငယ်များကိုလည်း ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ပြင်ပတွင် လိုက်လံသတ်ဖြတ်ရန် ကြိုးစားခြင်း များလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သူပါ။ ဒေါက်တာကိုကိုကြီးနဲ့ အချိတ်အဆက် ရှိသူများမှာ အစ္စလာမ်မစ် အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များမှ ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ထို အကြမ်းဖက် ကွန်ယက်များအား ငွေပေး၍ မြန်မာအစိုးရအား ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့တွင် ဆန္ဒပြစေရန် စေခိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ယခုလက်တလော ဗိုလ်ချုပ်ပုံနဲ့ အမေစုပုံကို မီးရှို့ပြစေခြင်းဟာလည်း ဒေါက်တာကိုကိုကြီးရဲ့ အစီအမံတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အမေစုကိုလည်း အမြဲတစေ တိုက်ခိုက်လေ့ရှိသူပါ။
ဒေါက်တာကိုကိုကြီးဟာ ရိုဟင်ဂျာအရေးအား ကမ္ဘာမှ အာရုံစိုက်စေရန် နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ကြိုးစားခဲ့ရာတွင် KL တွင်ပြုလုပ်သည့် ဘင်္ဂါလီ ထောက်ခံပွဲအား မလေးရှား ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း မဟာသီ ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ရန် စီစဉ်ခဲ့သလို၊ မြန်မာနိုင်ငံရေး ကျွမ်းကျင်သူလို့ မိမိကိုယ်ကို ခံယူထားတဲ့ ဒေါက်တာဇာနည်ကိုလည်း အပေးအယူလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘရူနိုင်း ဘုရင့်တက္ကသိုလ်မှ အလုပ်ထွက်တော့မည့် ဒေါက်တာဇာနည်ကို ရိုဟင်ဂျာအရေးအား နိုင်ငံတကာမှ အာရုံစိုက်လာစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်လျင် (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံတကာ မီဒီယာမှာ မြန်မာလူမျိုးများနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအား အပုတ်ချနိုင်လျင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပေးမည်ဟု ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ခဲ့ သလို၊ ဒေါက်တာ ဇာနည်အားလည်း ငွေလွှဲပေးခြင်းများ ပြုခဲ့ပါတယ်။
အမိ မြန်မာနိုင်ငံကို နည်းလမ်းမျိုးစုံနှင့် စော်ကားနေသည့် ဒေါက်တာကိုကိုကြီးဟာ မလေးရှားနိုင်ငံသား ခံယူထားသော်ငြား၊ မြန်မာနိုင်ငံသား ပတ်စပို့အားလည်း သက်တန်းမှန်မှန်တိုးလျက် ရှိပါတယ်။ ထို့အတူ မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး အနီးတ၀ိုက် မနက်ဝေလီဝေလင်း အချိန်များနှင့် ညနေစောင်း အချိန်များမှာ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လုယက်မှု အများစုဟာလည်း ဒေါက်တာကိုကိုကြီး၏ လူမိုက်ဂိုဏ်းအုပ်စု၏ လက်ချက်များပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော လုပ်ရပ်များကြောင့် ဒေါက်တာကိုကိုကြီး၏ နောက်ကွယ် မှ သွေးထိုးနေခြင်းနှင့် လူမဆန်သည့် လုပ်ရပ်များအား မြန်မာပြည်သူတို့ သိရှိစေဖို့ ဘင်္ဂလီကျူးကျော်သူများကို တားဆီးဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ထံ စာရေး အကြောင်းကြား လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 8:47 PM